KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Maleeshiyaadka Shababaka oo Qof Rayid ah ku dilay nawaaxiga Baardheere
Maleeshiyaadka Shababaka oo Qof Rayid ah ku dilay nawaaxiga Baardheere
Kismaayo (Keydmedia) - Maleeshiyaadka Kooxda Shabaabka ee ka arriya gobbolka Gedo gaar ahaana deegaanka Daabley oo gobbolklaasi ka tirsan ayaa halkaasi ku dilay Qof rayid ah, ayadoona aan ilaa iyo hadda aan la garaneynin sababta ay qofkaasi u dileen.
Ninkaan ay Shabaabku dileen ayaa lagu magacaabi jiray Cabdi Diiriye Maxamuud waxaana uu kamid ahaa Shaqaalaha Shirkada Hormuud ee deegaanka Daabley ee gobbolka Gedo, waxaana meydka ninkaan oo inta si xun loo gowrcay laga helay wado dhexdeeda.
Maleeshiyaadka arxan laawayaasha Shabaabka ayaa sida caadada ay ka dhigteen waxaa ay dadka Soomaaliyeed ay kula kacaan falalkan wuxuushnimada ah ee noocaan oo kale ah.
Dadka Soomaaliyeed ayaa iyagu aaminsan in wakhtiga Maleeshiyaadka Shabaabka uu gebgeba yahay.
Keydmdia.net - Xafiiska, Kismaayo